Shirqoolka cadowga iyo sheeko baralayda culimo ku sheega. | Halganka Online
Mahad Dhamaanteed Allaah ayey u sugnaatay xumaan oo dhanna ka hufan Nabadgalyo iyo Naxariisna ha ahaaho ambiyada Allaah Dhammaantood…
Waxaan marka hore salaamayaa dhamman Muslimiinta caalamka gaar ahaan kuwa cadowga Alle wajahaya naf iyo maalba Allaah waxaan ugu rajaynayaa inay helaan labadii nasri ee Allaah iyo Rasuulkiisu sheegeen ee ahaa (Nasru fii dunyaa aw nasru fil aakhira) intaa ka dib…
Waxaa cad oo aan daah saarnayn in shirqoolada iyo hagardaamada uu cadawga Allaah iyo kan ummadda Muslimiintu uu yahay mid cad oo aan daah saarnayn Allaah(swt) uu horey inoogu sheegay…
Waxa kaloo cad in ummadda Muslimiinta ah dhexdooda laga helaya kuwo daahirkoodu muslim u egyahay laakiin uur kagaal ah (munaafiqiin) iyaga Allaah iyo Rasuulkiisu way noo shegeen…
Haddaba nuqdadaan (maqaalkan) yar waxaan jeclaa inaan aragtidayda ku cabiro sida cadowga iyo shirqoolkiisa ayan dad badan oo magaca culimo huwani u fahmin balse aad mararka qaarkood is leedahay qaflay ku jiraan marka loo eego mowqifka aay ka istaagayaan waxyaalaha dhacaya ee caamo iyo caalimba uu arkayo ama qof walbaa fahamaya ujeedooyinka ka dambeeya.
Waxaana xaqiiq ah dunida hadda aaynu ku noolnahay ama ummadihii innaga horeeyey weligeedba laba siraac (loolan) ayaa ka jiray mid xaq ah (Xisbu Llaah) oo Allaah jidkiisa ku taagan iyo mid baadil ah(Xisbu Shaydaan) oo Allaah jidkiisii diidan
Waxa xaqiiq ah in maantana aay dunidu sidaa tahay oo aay ku dagaalamayaa xaqa Allaah iyo shaydaan iyo miciis (jaalkiis). Qof walbow is waydii meeshaad raacsan tahay adigu isa sax intaan xisaabtii Allaah kugu iman aan jawaab kooban bixiye waxaad jaal la tahay laba mid uun: Aqalka cad (White House) oo aan anigu u aqaan aqalka shaydaanka (Davil House), aqalkaasoo qaba fikradda ah markaan luuqaduu isticmaalo aan ku sheego: Either my way or the highway…!!! oo macnaheedu yahay ama aniga iraac ama hawada ka cab oo hanjabaad ah. Amase waxaad taageersan tahay (jaalkiis tahay),inta ka soo horjeeda ee Allaah kitaabkiisa inay u xukun tagaan raba meel kasta haka joogaan dunidee. Iyaguna waxay ku jawaabeen sidatan: Lanaa mowlaanaa walaa mowlaa lakum…!!! oo iyana macnehuudu yahay: Allaah kaliya ayaan leenahay adiguna Allaah ma lihid ee shaydaan baa kuu Allaah ah.
Hadaan dulucda hadalkayga u soo dago gaar ahaan Soomaaliya waxa isku haysta labadaa fikradood oo aan kor ku soo xusay dadkuna ha ogaadaan ama yaysan ogaane waxay lakala jiraan labadaa siraac (loolan) xujo kastoo ha daliishadee haduu yahay nin caalim sheegtay ama caamo.
Sababta aan arrinta usoo qaatay waxay tahay dhacdooyin dhowr ah oo Soomaaliya ka dhacay ayaan rabaa mid walba inaan wax ka xuso anigu aan Allaah uga fogaaneyn cidna ku dulmiyen :
1-Dalkeena waxa hadda ku sugan niman hub culus wata (heavy armies) oo aan aaminsanahay inay badankoodu yihiin niman aan waxba aamin sanayn (cawaan gaalo ah): macnaha xataa masiixi maaha, oo cadow ah habka aay haystaana lagu tijaabiyo meelaha dadku ku badan yahay si loo ogaado dhibka uu gaysan karo: taasoo la mid ah dawooyinka cusub intaan dadku isticmaalin waxaa lagu tijaabiyaa noolaha kale. Dalalka aay ka yimaadeena aayan askar u ahayn balse aay yihiin niman calooshood u shaqaystayaal (merceneries) ah oo ninka cadowga Allaah(swt) ugu weynaa ee Bush uu qortay si uu iftiimka Islaamka ee Geeska Afrika u dumiyo warkaasi waa xaqiiq isagoo cajal video ah wuxuu ku jiraa webab badan oo afka Soomaaliga ku soo baxa sida Hillaac.net
2-Niman dowlad sheegtay oo isugu jira niman magac culimo wata iyo kuwa cilmaaniyiin ah ama aaminsan inaan Islaamka wax lagu xukumi karin waqtigan casriga ah.
3-Qolo la magac baxaday ahlul sunna wal jameeco oo iyagu afduubay magacii guud ee dadka Muslimiinta ah, qoladaani waa guuto ka tirsan ciidamadii Xabashida ee dalka laga eryey waxayna ku sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolada dhexe iyo xad beenaadka aan la wadaagno gobololada soomaalida ee cadowgu haysto (Soomaali Galbeed). Xabashidaa toos u maamusha sidii kuwa xamar jooga aay Uganda iyo Burundi u maamulaan. Waxayna u taagan yihiin inaan carriga Allaah (swt) ee Soomaalidu degto aan shareeco lagu dhiqin.
3-Niman duubtay taajkii culimada oo aanan anigu shakhsiyan maqal hay’adda sharciga ee magacowday. Kuwan laftooda waxa kujira niman lagu tuhunsan yahay inay baarlamaanka dowlad ku sheega(DKM) ku jiraan.
Afartaa qolo waa isku dhan waxaana qabaa inay saxan wax kuwada cunaan siduu horey walaal Soomaaliyeed u yiri: Cibaara la arkaye, culimo, cilmaaniyiin iyo cawaan(gaalo) ayaa saxan wax kuwada cunaya. Saddexda kooxood oo hore waxaa jira meelaha aay joogaan xaaraanta iyo xalaashu makala soocna oo intaa dadkay boobaan ama laayaan. Wax amni ahna kama jiro kamana jiri karto oo waxba kama duwana qowlaysatii (hogaamiye kooxeedyadii iyo TFG Cabdullahi Yuusuf) xamar laga cayrshay ee aay iyagu bedeleen.
Qolada afaraad iyagu maaha koox u dhisan qaab dowladeed ama urur hubaysan laakiin waxay sharciyeeyaan wixii labada kooxood ee ugu horeeya (gaalada & DKM) dantoodu ku jirto iyagoo ku hadaaqaya in dadku dhamman Muslimiin yahay sidaasna ku sharciyeeya dhacdooyin badan ama ku cambaareeya kooxaha Islaamiyiinta. Mana maqal anigu iyagoo gaalada dadka laynaysa iyo kuwa aay ilaalisaba cambaareynaya. Haddayse dhacdo waxay ku afgobaadsadaan waxaa fidnadaa ka dambeeya ciddii weerartay oo daandaansiga bilowday, taasoo loola jeeda (Islaamiyiinta) waxayna u muuqataa in joogitaan gaaladu uu sharci yahay ama aay dowlad Islaami ahi u yeeratay ciddii weerarta iyo wixii aay laayaana aay yihiin dad mudan in la laayo maadaama ciidamadii dowlada ilaalinayey la weeraray.
Taasi waxay ka mid tahay shirqoolada cadowgu dhigay culimada qaarkeedna ayan garan iyaguna aay noqdaan mindidii dadka Muslimiinta ah lagu gowracayey ha ogaadaan ama yeyasan ogaane. Waxaa kaloo dibadaha ka qayliya kooxo iyaguna taajkaa culimada xirtay oo cambaareyn iyo masabid usoo tafaxaytay beryahan dambe, hadii aan soo dhaweeyo kooxdii carriga Ingiriiska maalmo ka hor dadka Muslimiinta dusha ka saaray waxayan iyagu qaadin ama sheegan waa qorshe kale oo cadowgu maleegayo.
Nimanka jooga Ingiriiska waxaan hubaa oo aan ogahay in qaar ka mid yihiin kooxda loogu yeero DKM qaarkoodna aay diidan yihiin in lala jihaado cadowga Allaah (swt), cibaadana uma arkaan siduu horey Walaal mujaahid ah u yiri markuu qolada aan jihaadka aamin saneyn ama ka baqa jihaadka ku lahaa ”Cibaadaba ma moodaan kufrigoo layska celiyaaye”!!! Waan qabaa in dad aqoon lihi ku jiraan laakiin masalo diini ah kama ayan hadal ee waa niman sheekeeyey oo aay aniga iila muuqato inay cid ku qancinayaan ama aay wax kaga raadsanayaan (Wallaahu aclam).
Haddii aan la is indha tireyn ama been la sheegeyn walaalaha Muslimiinta ah dhulka aay gacanta ku hayaan caad ma saarna nabadd iyo raalli ahaanshaha Allaah meeshuu gaaray. Sababtoo ah meel xadkii Allaah (swt) lagu oogayo dadka Muslimiinta , dadakuna u hogaansan yahay raali ahaanshaha Allaah (swt) shaki kuma jiro nabad iyo barqaaqo in la helayo.
Waxaan nuqdadaan (qoraalkan) ku soo kufin lahaa laba arrimood:
Mida hore, Allaah (swt) in laga baqo oo Allah laysu dhiibo oo Allaah (swt) raali gelin laga dalbo ayaa waajib ku ah qofka Muslimka ah. Qofkii taasi aay seegtana waa arrin khatar ar, qof walbowna ku baraarug in Allaah (swt) kaligaa aad hor istaagi doontid maalinta xisaabta.
Arrinta kale, haddii cadow ina qabsaday weliba gaalo ah dadku ma sinnee uu rag (rijaal) Allaah (swt) ku sugay inay gaalada iyo cawaankeeda har iyo habeenba is hor taagaan kuwaasoo Allaah (wst) quraankiisa ku sheegay inay fulin doonaan ballantii aay Allaah (swt) la galeen, ninkii aan darajadaa gaarin Allaah (swt) ha gaarsiiyo ninkii taa ka xumoow Allaah (swt) u soo noqo oo toobaa furan; haddii aadan walaalaha Muslimiinta ee codowgii hore saaray haddana midka hadda jooga u taagan inay saaraan ama shareecada Allaah koonkaan (dunida) ka hir galiyaan, aadan waxba u tari karin af xumadaada ka dayso adigoo Allaah (swt) ka baqaya. Haddii cid la maagayo waxaa maagid iyo cambaareyn mudan cadowga innagu soo duulay ee waliba gaalada ah oo dadka Muslimiinta laynaya oo ashcaarta (ku dhaqanka shareecadda) Allaah (swt) la dagaalmaya iyo kuwa u yeertay ee hoosta kaga jira, indhihiinu ha arkaan, dhegihiinuna ha maqlaan cadowgaa gaalada ah iyo cawaankiisa, hadday yihiin indho quraanka iyo sunnanka akhriya ama dhego dhegaysta.
Allaah (swt) ayaan dambi dhaaf weydiisanayaa uguna dhawaanayaa qoraalkan cid gaar ahna kuma durin ee waxaan ka hadlay wixii dhacay ee daahirka ah.
Fiiro gaar ah: waxaan shaki ku jirin in shirqoolo badan oo kuwan ka khatarsan ay soo socdaan qolaa Allaah (swt) ku fideyn doonaa sida caadiga ah qolo kalena Allaah (swt) ayaa xaqa ku sugi doona, Allaah (swt) hanaga dhigo kuwii mar walba xaqa ku sugnaada..!!!
Suldaan Maxamed Suldaan Garyare
« Si Aanay U Qarqoomin Doonta Jihaadku Wilaayada Gobolka Banaadir Ee Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab Oo Shaley Heshiis kala Dhax Dhigay Qaar kamid ah Beelaha Wada Dega Gobolka Banaadir. SAWIRO »